လော်ရိုးရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဥ် ၁၅ ခန့်မှန်းချက်များ - SPORTS MYANMAR
လော်ရိုးရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဥ် ၁၅ ခန့်မှန်းချက်များ
By Edi Tor December 3, 2019
ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ဦးဆောင်နေသူ လီဗာပူး ဟာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မြို့ခံပြိုင်ဘက် အဲဗာတန် အသင်းကို အန်ဖီးမှာ လက်ခံ ယှဥ်ပြိုင်ကစား ရမယ့် ပွဲစဥ်မှာ ၎င်းတို့ရဲ့ အကောင်းဆုံး ရာသီအစ မှတ်တမ်းကို ဆက်လက် နိုင်ဖို့ အတွက် ရေပန်းစား နေပေမယ့် ယာဂန်ကလော့ ရဲ့ အသင်း အနေနဲ့ မာဆေးဆိုက် ဒါဘီမှာ ၎င်းတို့ရဲ့ ရှုံးပွဲ မရှိ မှတ်တမ်း ကို ဆက်လက်ကာ စံချိန်သစ် တင်နိုင်မှာလား? ဟိုဆေးမော်ရင်ညို ရဲ့ အိုးထရပ်ဖို့ဒ် အပြန် ကကော လှပနေမလား? လော်ရိုးဟာ ဒီကြားရက်မှာ ကစားရမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဥ်တွေကို ယခုလိုပဲ ခန့်မှန်း ပေးသွား ပါတယ်။
(၁) ဘန်လေ Vs မန်စီးတီး
ဘန်လေ အတွက် အဆိုးဆုံး ဖြစ်နိုင်တဲ့ အရာ ကတော့ မန်စီးတီး ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့က က စိန့်ဂျိမ်းပက်မှာ နယူးကာဆယ် ကို နောက်ကျ ချေပဂိုး ခွင့်ပြု ခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စီးတီးဟာ ဒီပွဲအတွက် အားခဲ နေပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီရာသီ title race မှာ ရမှတ်တွေ ဆုံးရှုံး ထားပြီး ဖြစ်တဲ့ ပက်ဂွာဒီယိုလာ ရဲ့ အသင်းထံမှ တုန့်ပြန်မှုကို တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထား ပါတယ်။ စီးတီးရဲ့ ခံစစ်ပိုင်း အားနည်းနေမှုတွေကြောင့် ဘန်လေကလည်း ၎င်းတို့ကို ပြသနာတွေ ပေးစွမ်း နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိ ချန်ပီယံဟာ လယအိမ်ရှင်အတွက် အရမ်းကို အင်အားကြီး နေတယ်လို့ ကျွန်တော် ခံစား မိနေပါတယ်။
လော်ရိုးရဲ့ ခန့်မှန်းချက် – ဘန်လေ ၀ – ၂ မန်စီးတီး
(၂) ချဲလ်ဆီး Vs အက်စတွန်ဗီလာ
ချဲလ်ဆီးတို့ စနေနေ့က ဝက်ဟမ်းကို အိမ်ကွင်းမှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာဟာ တကယ်ကို ထူးဆန်းတဲ့ ရလဒ်ဖြစ်တယ် ဆိုတာ ဒီနှစ်သင်းရဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရလဒ်တွေကို ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ တစ်ခါတစ်ရံ ဖြစ်တက်တဲ့ အရာပါ။ ဗီလာ ကတော့ ဒီရာသီ အဝေးကွင်းမှာ ရလဒ်တွေ မကောင်း ခဲ့ပေမယ့်လည်း ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က အိုးထရပ်ဖို့ဒ်မှာ ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲစဥ်မှာတော့ ပုံစံကောင်းကို ပြသပြီး သရေတစ်မှတ် ရယူ နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဂျက်ဂရီလစ်ချ် ဟာ အကောင်းဆုံး ကစားနေတာကြောင့် ဗီလာဟာ ချဲလ်ဆီး ဂိုးပေါက်ကို ခြိမ်းခြောက် နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံး မှာတော့ ချဲလ်ဆီးပဲ အသာ ရသွားမယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။
လော်ရိုးရဲ့ ခန့်မှန်းချက် – ချဲလ်ဆီး ၂ – ၀ အက်စတွန်ဗီလာ
(၃) မန်ယူနိုက်တက် Vs တော့တင်ဟမ်
တော့တင်ဟမ် မန်နေဂျာ မော်ရင်ညိုဟာ ယူနိုက်တက် နည်းပြရာထူးကနေ ထုတ်ပယ် ခံခဲ့ရပြီး ၁၂ လ အကြာမှာ အိုးထရပ်ဖို့ဒ်ကို ပြန်လာမှာ ဖြစ်ပြီး ဒါဟာ အရမ်းကောင်းတဲ့ ပြန်လည် တွေဆုံမှု ပါပဲ။ မန်ယူနိုက်တက် ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ကြိုဆိုမှုကိုတော့ ကျွန်တော် စိတ်ပျက်မိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူရွေးချယ် လိုက်တဲ့ အသင်းဟာ ဘယ်လို အသင်းလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော် မြင်ချင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဟိုဆေးဟာ ဒီပွဲမှာ အနိုင်မရရင်တောင် လုံးဝ ရှုံးလို့ မဖြစ်ဘူး ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ သွားချင်မှာပါ။ ကျွန်တော် ကတော့ စပါးတို့ ဒီပွဲမှာ အနိုင်ရသွားမယ်လို့ မြင်နေပါတယ်။ မော်ရင်ညိုဟာ တော့တင်ဟမ်ကို ကိုင်တွယ် နေတဲ့ ကာလတို အတွင်းမှာ အပြောင်းအလဲ ကြီးကြီးမားမား လုပ်ထားခြင်း မရှိသေးပေမယ့် ၎င်းဟာ အရမ်းကို ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ မန်နေဂျာပါ။ ဒါ့ကြောင့်လည်း သူဟာ ဒယ်လီအလီ ဆီက အကောင်းဆုံး ပုံစံကို ဆွဲထုတ် နိုင်ထားတာပါ။
စပါးကို ကျွန်တော် ထောက်ခံထားတဲ့ နောက်ထပ် အကြောင်းရင်း ကတော့ ယူနိုက်တက် ရဲ့ လက်ရှိ ကစားပုံကြောင့်ပါ။ ကျွန်တော် ပြီးခဲ့တဲ့ ပွဲစဥ်တွေမှာ ယူနိုက်တက် ကို အတော်များများ ထောက်ခံ ထားခဲ့ပါတယ်။ ဘာလိူ့လဲဆိုတော့ သူတို့မှာ ထူးချွန်တဲ့ ကစားသမားတွေ ပိုင်ဆိုင်ထား လို့ပါ။ သူတို့ အလုပ် ဖြစ်မယ်လို့ ကျွန်တော် မျှော်လင့်ထား ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီအသင်းဟာ ကစားသမားကောင်းတွေ ရှိနေတာနဲ့ မလိုက်ဖက်အောင် ကောင်းကောင်း မကစား ထားနိုင်ပါဘူး။ ဒါဟာ အိုလီဂန်နာဆိုးရှား ဖြေရှင်း ရမယ့် ကြီးမားတဲ့ ပြသနာ ပါပဲ။
လော်ရိုးရဲ့ ခန့်မှန်းချက် – မန်ယူနိုက်တက် ၀ – ၂ တော့တင်ဟမ်
(၄) လီဗာပူး Vs အဲဗာတန်
နည်းပြ မာကိုဆေးဗားရဲ့ အနာဂတ်ဟာ စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်နေပြီး ၎င်းရဲ့ အဲဗာတန် ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ လက်စတာကို ရှုံးခဲ့ပေမယ့် ကစားပုံ အများကြီး ကောင်းလာ ခဲ့ပါတယ်။ ဆေးလ်ဗားဟာ ကစားသမားတွေရဲ့ ထောက်ခံမှုကိုလည်း ဆုံးရှုံး ထားခြင်း မရှိပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ့အသင်းဟာ သူ့အတွက် ကစားနေတာကြောင့် ဘာမှ အမှားမရှိပါဘူး။ ဆေးလ်ဗား လိုအပ်နေတာကတော့ ဂိုးသွင်းကောင်းတဲ့ တိုက်စစ်မှုးပါ။ အဲဗာတန် အနေနဲ့ လီဗာပူး ကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ အများကြီး လိုပါသေးတယ်။ လီဗာပူး အတွက် ကျွန်တော် စိုးရိမ်တဲ့ တစ်ခုတည်းသော အရာ ကတော့ အလီဆွန် ရဲ့ နေရာမှာ အက်ဒရီယန် ဝင်ကစားမှာ ကိုပါ။
ကျွန်တော် ကတော့ အဲဗာတန်ရဲ့ ကစားပုံဟာ တိုက်ရိုက် ကျနေမယ်လို့ ယူဆထားပြီး ထောင့်ကန်ဘောတွေ ၊ set-pieces တွေကနေ အက်ဒရီယန် ကို ဖိအားပေး ပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အက်ဒရီယန် ဟာ ဒီအပိုင်းမှာ အားနည်းချက် ရှိနေလို့ပါ။ ကျွန်တော် ကတော့ ဒီပွဲမှာ လီဗာပူး တို့ အနိုင်ရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် လွယ်လွယ်ကူကူတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနှစ်သင်းရဲ့ လက်ရှိ အနေအထား ကို ကြည့်လိုက်မယ်ဆိိုရင် လီဗာပူး ဟာ အရမ်းကို အသာစီး ရနေမယ်ဆိုတာ မြင်တွေ့ နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ဒါဘီပွဲစဥ် ဖြစ်ပြီး ပြိုင်ဆိုင်မှုက ပြင်းထန်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လော်ရိုးရဲ့ ခန့်မှန်းချက် – လီဗာပူး ၂ – ၀ အဲဗာတန်
(၅) အာဆင်နယ် Vs ဘရိုက်တန်
ဘရိုက်တန် အသင်းဟာ စနေနေ့က လီဗာပူး ကို ရှုံးခဲ့ပေမယ့် အန်ဖီးမှာ အတော် ခြိမ်းခြောက်မှု ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး အကောင်းဆုံး ကစားဖို့လည်း ကြိုးစား ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘရိုက်တန်ဟာ set-pieces တွေကနေ ၂ ဂိုးခွင့်ပြု ခဲ့ရတာ​ကြောင့် စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်နေမှာ သေချာပါတယ်။ အဆိုပါ ညမှာ ဘရိုက်တန် တို့ အားနည်း ခဲ့တာ ဒီအပိုင်းပဲ ရှိခဲ့ပေမယ့် အမှတ်ဗလာနဲ့ အိမ်ပြန် ခဲ့ရပါတယ်။
အာဆင်နယ် ကကော? ယွန်းဘတ် ကိုင်တွယ် နေတာ ဖြစ်ပေမယ့် ဘာမှ မပြောင်းလဲ သွားပါဘူး။ သူတို့ဟာ တိုက်စစ် ကစားတာ ကောင်းနေပေမယ့် နောက်တန်း ကတော့ ပွင််နေဆဲပါ ။ ဘယ်အသင်း မဆို သူတို့ကို ပြသနာ ပေးစွမ်း နိုင်လောက်တဲ့ ပုံစံမျိုး ပါပဲ။ အကယ်၍ အာဆင်နယ် တို့ နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ ညတစ်ညပါ။ လီဗာပူး နဲ့ပွဲမှာ ဘရိုက်တန် ရဲ့ ကစားပုံကို ကြည့်ခဲ့ပြီးနောက် အာဆင်နယ် အတွက် အားတက်စရာ ကတော့ ၎င်းတို့ရဲ့ တိုက်စစ်ပိုင်း အားနည်းမှုတွေပါပဲ။
လော်ရိုးရဲ့ ခန့်မှန်းချက် – အာဆင်နယ် ၂ – ၀ ဘရိုက်တန်
ခရစ်စတယ်ပဲလေ့စ် ၂ – ၁ ဘုန်းမောက်
လက်စတာ ၂ – ၀ ဝက်ဖို့ဒ်
ဆောက်သမ်တန် ၁ – ၁ နော့ဝှစ်
ဝုဖ် ၂ – ၀ ဝက်ဟမ်း
ရှက်ဖီး ၂ – ၁ နယူးကာဆယ်